Cristiano Ronaldo oo farriin niyad dhis ah u diray Ciyaartooy da’yar oo laga helay cudurka Kansarka – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo farriin niyad dhis ah u diray Ciyaartooy da’yar oo laga helay cudurka Kansarka
Haaruun November 12, 2016
(Lisbon), 12 Nof 2016 –Weeraryahanka xulka Qaranka Portugal iyo kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa farriin niyad dhis ah u diray Ciyaartooy da’yar oo uu haleelay cudurka halista ah ee Kansarka.
Wiilkan oo 19 jir ah ayaa xilli ciyaareedkan uun heshiis u saxiixay kooxda Boastiva ee Bortuqiiska, waxaana lagu magacaabaa Edu Ferreira balse nasiib darro waxaa lagu sheegay cudurka Kansarka oo uu haatan dawadiisa qaato, taas oo gebi ahaanba dhinac u tuurtay riyadiisii Kubadda Cagta.
Kooxda uu wiilkan qandaraaska la galay ayaa bixinaysa daawada uu qaadanayo Edu.
Ronaldo ayaa wiilkan yar u soo diray Funaanaddiisa lambarka 7′ ee xulka Bortuqiiska oo uu qoraal gacmeedna ku soo dul qoray, iyadoo sidoo kalena Ronaldo uu farriimo kale u diray inankan, waxaana uu u rajeeyay Caafimaad.
CR7 ayaa caan ku ah inuu caawiyo dadka dhibaateysan ee dunida ku kala nool haba ugu badnaadeen carruurta da’da yar.
Inter, Milan iyo Barcelona oo iskula dheggan Roger Guedes
Dani Alves oo fariintan u diray Lionel Messi...(Kaddib kulankii uu xulka Brazil 3-0 ku dhuftay Argentina)